रिमा विश्वकर्माको घोषणा : अर्को विवाह गर्छु (भिडियोसहित) – Himshikharnews.com
रिमा विश्वकर्माको घोषणा : अर्को विवाह गर्छु (भिडियोसहित)
२३ असार २०७६, सोमबार २१:४६
काठमाडौं । चर्चित नायिका रीमा विश्वकर्मा अर्को विवाह गर्ने तयारीमा जुटेकी छिन् । शनिबार प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको “जनता जान्न चाहन्छन्” कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नायिका विश्वकर्माले आफूले अर्को विवाह गर्न सक्नेबारे खुलासा गरेकी हुन् ।
धमलाले हाक्काहाक्की तपाईको विवाह हुने सम्भावना कत्तिको छ भनि प्रश्न तेर्साएपछि रिमाले पनि सिधासिधी जवाफ फर्काईन् । उनले भनिन्, “छ नि । भोलि कसले देखेको छ र ? विवाह हुन्छ नै भनेर म ग्यारेन्टी दिन सक्दिन् । तर, त्यो सम्भावना छ ।”
धमला त्यतिमात्रै रोकिएनन । उनले अर्को प्रश्न तेर्साए, विवाहको लागि तपाईको नजरमा कोही युवक परेको छ ? जवाफमा रिमाले भनिन्,”साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले मेरो प्राथमिकतामा करियर नै परेको छ । त्यो हिसाबले अहिले हालसाललाई चाहीँ छैन ।”
पत्रकार धमलाले झैं आफूले पनि यो देशमा महिला प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहेको रिमाको भनाई छ । उनले भनिन्,”म यो पदको लागि योग्य छु की छैन भन्दापनि योग्य महिला नेतृले प्रधानमन्त्रीको पद पाउनुपर्छ । नेपालमा पनि देश हाँक्नसक्ने महिला नेतृहरु हुनुहुन्छ ।”रिपोर्टर्सनेपाल डटकमबाट।